Home Wararka Axmed Madoobe oo u sheegay Qoor Qoor “Aqoonteedii & Dadnimadii ma lihid...
Axmed Madoobe oo u sheegay Qoor Qoor “Aqoonteedii & Dadnimadii ma lihid ee naga dhex bax”
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye [Qoorqoor], ayaa dib ugu laabanaya magaaladda Garowe ee caasimadda dowladda Puntland, sida loo sheegay MOL
Socdaalka Qoorqoor ayaa salka ku haya laba arrimood oo kala ah;
Axmed Madoobe oo uu kala kulmay diidmo cad, kaddib markii uu ka been sheegay in xalka uu Qoor Qoor kula soo heshiiyay Fahad Yasin oo ahaa in la kala qeybiyo kuraasta Jubbaland.
Saciid Deni uu ku soo qanciyo in la go’doomiyo Axmed Madoobe si aay u dhacdo Doorasho uu raalli ka yahay Farmaajo.
Sidoo kale, safarka Qoorqoor ayaa daba socda shir ay xalay Garowe ku yeesheen musharaxiinta ku sugan Garowe iyo Hoggaanka Puntland, taasoo shaki badan aay ka qabto Villa Somalia.
Qoorqoor oo kasoo duulaya magaala madaxda Muqdisho halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha hay’adda sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin Daahir ayaa u kala dab-qaadaya Villa Soomaaliya iyo madaxda Puntland iyo Jubaland oo ay wehliyaan musharaxiinta.
Qodobka ugu weyn ee Qooroor xalka u goobayo waa arrinta gobolka Gedo iyada oo warar horudhac ah oo kaga helayo is-afgaradka laga gaarey, ay muujinayaan in la isla qaatay in Villa Soomaaliya iyo hogaanka Jubaland ay kala qeybsanayaan kuraasta labada aqal ee gobolkaas, balse arrintaas uu beeniyay Axmed Madoobe gaashaankana ku dhuftay.
Sida ilo wareedyo ku sugan magaalada Kismaayo aay MOL u sheegeen, waxaa qadka telefonka kuwada hadlay Axmed Madoobe & Qoor Qoor, wuxuuna Axmed Madoobe u sheegay Qoor Qoor in uu isaga dhex baxo arrimahaan “Axmed Aqoon uma lihid dad la heshiisiiyo, waana markii labaad oo aad iga been sheegtid, fadlan isaga dhex bax arrimahaan” Ayuu yir Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa ka biyo diiday in kuraasta Jubbaland loo kala qeybiyo Villa Somalia & Kismaayo, qorshahaas oo ah mid aanu Axmed Madoobe waxba ka ogeyn balse uu Qoor Qoor sameystay sida MOL loo xaqiijiyay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa si adag wuxuu u diidan yahay in uu mar kale miiska wadahadalka la fariisto madaxda maamuladda si wada ogol looga gudbo is-qabqabsiga ka taagan habraaca doorashooyinka 2020-21.